Iyini isaphulelo sokukhokha isikweletu eshoyo? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki AC Isaphulelo credit
Ukushintsha credit isaphulelo ngokuvamile ugijima phakathi kwamabhange amabili. Uma ibhange lingasenayo imali, lingakholeka imali kwenye ibhange. Lokhu ke isaphulelo sokukhokha. Lesi sikweletu ngokuvamile ibhizinisi eliphephile kula mabhange ngoba ukuvuthwa kuncane kakhulu. Kungaba cishe izinyanga ezintathu. Ngalesi sikhathi, ibhange kumele libuyisele imali. Kubalulekile, Nokho, ukuthi ibhange akulona nje isamba semalimboleko kumele abuyisele, kodwa futhi nesithakazelo. Ibhange liyisikhungo esingasidinga imali ngezikhathi ezithile njengomuntu wangasese.
Le mali kumele ikhokhwe. Phakathi kwabantu abazimele noma abantu basebhange nabangasese, leyo mboleko ngokuvamile ayikwenzeka. Ngakho-ke, le mali ayinayo indima kubantu abazimele. Lezi zingazivikela ngokwahlukana futhi mhlawumbe zibolekwe isikweletu ngesikhashana esifushane. Kubantu abaningi namuhla, i-credit isisombululo sokugcina ngaphambi kokuzama ukufaka isicelo sokungabonakali. Ngakho uma udinga imali, ungayiboleka ebhange. Kodwa isaphulelo sesikweletu sokushintshaniswa asihambisani. Ngenxa yokuthi lesi sikweletu sithandeka kakhulu kuningi. Idlala kuphela indima lapho ukushintshaniswa kwamabhange bese uboleke imali. Bobabili kufanele bazi ukuthi imali yesaphulelo sokukhokha ibalulekile ekuthengisweni kwemithetho eminingi.
Noma ngubani ongasekho oketshezi futhi engasakwazi ukuxazulula izikweletu kuye kwaba okungalungile kunoma yikuphi futhi kufanele acabange ngalokho akwenzile okungalungile. Lesi sikweletu ngokuvamile siyisenzo sokugcina futhi singasindisa othile. Kodwa akufanele nje ube nama-blue eyed. Le mboleko njalo ihambisana nokukhokha okuthile. Ngokuqinisekile isikweletu senza umqondo omkhulu uma ukwaziswa kahle. Njengebhange uyazi ngamathuba akhona futhi ngaleyo ndlela futhi mayelana ne AC Isaphulelo credit Yazi. Khona-ke ungakwazi ukulungisa zonke izinto ezidingekayo futhi ube nesikhathi sokuzigcina. Ibhange kumele lifakaze ukuthi alisekho cashable. Le mboleko kufanele ibuyiselwe njalo ngesikhathi esifushane. Ngenkathi abantu abayimfihlo kuze kube seminyaka eminingana noma ngisho namashumi eminyaka banesikhathi sokukhokha inani lemali elikhudlwana lemali, lokhu akusilo iqiniso nge-loan exchange discount.
Iningi lababoleki liyakwazi ukwenza konke okungcono futhi lizozimisela ukucabanga kahle. Ngakho-ke, isaphulelo sesikweletu esishintshaniswayo siyindlela engcono kakhulu yokubhekana nabaningi. Uma udinga isikweletu njengomuntu wangasese, ungayithola, kodwa kufanele ube nekhredithi ehlukile. Ngisho nemboleko iyadingeka. Uzobona ukuthi ungalungile ngamathuba akho. Ngakho awukwazi ukuhamba kabi futhi ngokuqinisekile ngeke uzisole ukucabanga ngakho. Kuzo zonke izikweletu ezikhona kungenzeka imali kufanele ibuyiselwe noma kunjalo. Kumele futhi wazi kabanzi ngamanani entengo. Lezi zingaletha inani lemali mboleko futhi kwezinye izilinganiso.
Intshisekelo kufanele ibuyiselwe noma yikuphi. Ngakho cabanga ngokucophelela ngalokho okwenzayo nalokho ohlela ukukwenza. Ngakho ungaqiniseka ngokuqinisekile ukuthi awukwenzi lutho olungalungile futhi kamuva ngeke uzisole ngokuthola imali. Lokhu kusho ukuthi uzobuya maduzane futhi uzoba nezinsiza zezimali ezandleni zakho.
Isihloko sangaphambiliniIsilinganiso senzalo eguqulayo